Ururka dhallinyarada Milk-way Community Center oo dharka ciid ah guddoonsiiyay 40 carruur agoon ah “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Deeqdan dharka ah ee ay maanta Ururka Dhallinyarada Milk-way Community Center guddoonsiiyeen 40 carruur agoon ah iyo kuwa tabaaleysan isugu jirta ayaa ah kaalmo ay iska soo arruuriyeen dhallinyarada ururka, kuwaasi oo ugu talagalay in lagu ciidsiiyo carruurta agoonta ah kaddib munaasabad kooban oo ay ku qabteen Muqdisho.
Qaar ka mid ah Waalidiinta carruurta dhalay oo ka hadlayay musaanadda caruurtooda dharka ciida ah lagu guddoonsiinayay ayaa ka mahadceliyay kaalmo la soo gaarsiiyey.
Maxamed Muxiyadiin Cabdullaahi oo ah Guddoomiyaha Ururka Dhallinyarada Milk way Community Center ayaa sheegay deeqdan ay tahay mid lagu ciidsiinayo carruurta agoonta ah, uuna uga mahadcelinayo cidkasta oo gacan ku siisay howsha.
Ururka Dhallinyarada Milk-way Community Center ayaa sheegay in kaalmo tan la mid ah ay gaarsiin doonaan dadka aan maanta nasiibka u yeelan deeqda dharka ah ee ay qeybiyeen.
27-kii October ee sanadkii tegay ayay ahayd markii dhallinyarada Milk-way Community Center ay 9 qoys oo ka mid ah qoysaskii ay eheladooda ku dhiteen qaraxii Soobe guddoonsiiyay min labo boqol oo doolar, halka labo qoys oo kale oo dhibaateysan la guddoonsiiyay min boqol, iyadoo qoyskasta lacagta loogu geeyay Hoygooda.